Otu esi ebido mkpọsa mbinye aka email nke ọma (ESM) | Martech Zone
Otu esi ebido mkpọsa mbinye aka email na -aga nke ọma (ESM)
Na Tọzdee, Septemba 21, 2021 Na Tọzdee, Septemba 21, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị na -arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị otu onye ọrụ, enwere ohere maka ụlọ ọrụ gị iji ntinye aka email iji jikwaa na ịkwalite mmata, nnweta, mbilite n'ọnwụ, na atụmatụ njigide mana ime ya n'ụzọ na -adịghị emetụta. Ndị ọrụ gị na -ede ma na -eziga ọtụtụ ozi ịntanetị kwa ụbọchị ruo narị otu narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị puku kwuru puku, nke ndị nnata. Ala na ụlọ na email ọ bụla 1: 1 nke na -ahapụ sava email gị bụ ohere na -enweghị atụ nke anaghị enwetakarị uru.
Email ọ bụla nke onye ọrụ na-eziga nwere ohere iji nnukwu mbinye aka mara ya nke ọma, yana ịnye oku ka ọ rụọ ọrụ iji mee ka a mata ụgwọ ọrụ, ngwaahịa, ọrụ, wdg nke atụmanya ma ọ bụ ndị ahịa gị nwere ike ịmaghị. Ngwọta ya bụ ịhazi na ịzụlite atụmatụ maka ibuga mbinye aka email n'ofe ụlọ ọrụ gị.
Kedu ihe bụ Ahịa Mbinye aka Email (ESM)?
Ahịa Mbinye aka Email (ESM) bụ omume iji mbinye aka email gị maka ebumnuche ahịa dị ka ịbawanye ama ama na imelite CTR nke mgbasa ozi azụmahịa na ozi ịntanetị.
Etu ị ga -esi mee mkpọsa ire ahịa mbinye aka email nke ọma
Njikọta Office bụ ihe dị mkpa
Ndị ọrụ nọ na mpaghara na ụdị azụmahịa azụmaahịa dị ka Google ma ọ bụ Microsoft Office na -ejikwakarị akara mbinye aka email. Mgbe ọ bụla oghere dị ka nke a dị, obi dị m ụtọ na atụmatụ ọhụrụ abanyela n'ahịa - otu onye ndu bụ Newoldstamp. Newoldstamp bụ ikpo okwu etiti maka ijikwa mbinye aka nke ndị ọrụ wee nyere ndị otu gị aka imeziwanye nkwukọrịta n'etiti ndị ahịa na ndị ahịa.
Newoldstamp bụ ihe eji arụ ọrụ akpaaka nke anaghị achọ ka ndị ọrụ gị mee ihe ọ bụla. Pịgharịa mgbanwe niile site na dashboard anyị ozugbo na ntọala ndị ahịa email ha. Mekọrịta data na akpaghị aka site na Akwụkwọ ndekọ Ọrụ ma ọ bụ Oghere Ọrụ Google (nke bụbu G Suite) Akwụkwọ ndekọ aha ka imepụta mbinye aka dabere na otu ndebiri.
Uru nke Ahịa Mbinye aka Email
Uru nke ire mbinye aka email bụ na ndị otu nwere ike:
Mbinye aka email na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe gafee ndị ọrụ ụlọ ọrụ niile na-agbaso ntuziaka gị.
Mụbaa ntụgharị ahịa na ahịa site na nkwukọrịta email azụmahịa gị yana mkpọsa ọkọlọtọ mbinye aka email.
Jikwaa mbinye aka email niile site na otu dashboard. E guzobere mbinye aka email ngwa ngwa ma dị mfe.
Jikọta mbinye aka gị n'enweghị nsogbu na ndị ahịa email na ekwentị mkpanaaka, Google Workspace (nke bụbu G Suite), Exchange, Microsoft 365.
Obi abụọ adịghị ya maka ịdị irè ESM. Nlaghachi na itinye ego nke ESM buru ibu - Newoldstamp ahụla ihe ruru 34,000% laghachi na ntinye ego n'elu ikpo okwu ha. Enwere ike iji ikpo okwu ndị a wee kewaa nkwukọrịta dabere na ọrụ ndị ọrụ gị wee soro nzaghachi nke mkpọsa ndị ahụ nke ọma.
Otu esi ebido mkpọsa ahịa mbinye aka email na -aga nke ọma
Ndị otu nọ na Newoldstamp mepụtara infographic nke a na-aga ije site na nzọụkwụ 7 iji malite mkpọsa mbinye aka email na-aga nke ọma.
Chọta ebe maka mbinye aka email na atụmatụ ịzụ ahịa gị
Kewaa ndị na -ege gị ntị
Kọwaa ebumnuche mgbasa ozi ịre ahịa email
Zụlite atụmatụ mbinye aka email na ika ahụ n'uche
Hazie mkpọsa gị
Soro mgbasa ozi ahịa mbinye aka email gị
Kwalite mkpọsa dịka data a siri dị
Banye maka Newoldstamp
Ngosipụta: M na -eji njikọ njikọ maka Oghere Google.
Tags: arụ ọrụ ndekọctaemail mbinye akanjikwa mbinye aka emailemail mbinye aka ahiaemail mbinye aka n'elu ikpo okwuesExchangeoghere ọrụ googlemụbaa mgbanweinfographicmicrosoft mgbanweMicrosoft OfficeọhụrụoldstampOffice 365
Moqups: Mee atụmatụ, chepụta, ụdịdị, na jikọọ ọnụ na waya na okpokoro zuru ezu.